Maxay soo kordhin kartaa shaqa ka ceyrinta Sanbaloolshe iyo Saacid? - BBC News Somali
Image caption Madaxweyne Farmaaajo
"Faa'idada shaqa ka eryidda"
Taliyihii booliiska Soomaaliya Cabdixakin Daahir Saacid iyo agasimihii hay'ada nabad sugidda qaranka Cabdallahi Maxamed Sanbalooshe ayaa labadaba xilka laga qaaday.
Cabdiweli Garaad oo ka faallooda arrimaha amniga ayaa sheegay in "Shaqsiyaad la ceyriyo ay ka qoto dheeryihiin arrimaha amnidarada Soomaaliya".
"Waxaa horey shaqada looga eryay taliyihii nabad sugidda iyo kii booliska, haddana kuwii lagu badalay baa la eryay", ayuu yiri Cabdiweli Garaad oo BBC-da la hadlay.
" Waxay u muuqataa in indhaha dadka laga leexinayo in ay la xisaabtamaan dowladda", ayuu hadalkiisa ku daray.
Image caption Burburka uu geystay Weerarkii hoteelka Naasa Hablood 2
Cabdiweli Garaad oo amniga ka faallooda wuxuu sheegay, "Waxay u muuqataa in indhaha dadkaa lagu jeedinayo in nimankii howsha masuulka ka ahaa loo eryay dhacdadaas."
Machadka cilmi baaridda siyaasadda ee Heritage oo dhowaan warbixin ka soo saaray amniga iyo siyaasadda Soomaaliya ayaa keenay su'aal ah "sidee buu gaari qarax intaa la'eg wada, usoo gaaray bartamaha magaalada, isaga oo kasoo gudbay dhammaan baraha lagu baaro gawaarida ee teedsan waddada?"
"Waxaa jirto habacsanaan xagga amniga ah, gaar ahaan guuldarro weyn oo ka timid sir-doonka iyo hellidda xogta cadowga," ayaa lagu xusay qoraalka.
Madaxweyne Farmaajo oo 18-kii Oktobar, la hadlayay dibadbaxayaal wuxuu sheegay "Waxaan idiinkugu baaqayaa in aan dhisano ciidamada difaaca shacabka oo aan la dagaallanno Shabaab. Waa in aad difaacdaan hooyooyiinkeena, u kaca difaaca deriskiina, u kaca difaaca qarankiina."
"Isbeddelkan badan wuxuu wiiqayaa xasilloonida laamaha amniga, wuxuuna yareynayaa mas'uuliyadda isla xisaabtanka loo baahan yahay," ayaa lagu qoray warbixinta uu soo saaray machadka cilmibaaridda siyaasadda ee Heritage.
"Waxaa amniga asal u ah in ay wax wada yeeshaan shacabka iyo dowladda ayna wada ilaashadaan. Shacabka iyo dowladda waxaad moodaa in aynaan isku wax ilaashanayn hadda. Marka waa in isku wax la sameynsto, isku meelna laga duulo," ayuu yiri Cabdiweli Garaad.
Machadka Heritage oo fadhigiisu yahay Muqdisho ayaa ku taliyay in "ka adkaanta Al-Shabaab iyo soo celinta amniga dalka la siiyo ahmiyadda koobaad; waana in ay noqotaa dadaal laga wada qeyb qaadanayo."